ODF biyyatti galuuf qophii xumuradhe jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured ODF biyyatti galuuf qophii xumuradhe jedha
Addi Dimokraatawaa Oromoo (ADO) ykn ODF erga bara 2013 hundeeffamee kaasee biyyatti deebi’ee qabsoo geggeessuuf akka fedhii qabu yeroo addaddaatti ibsaa ture. Haala biyyatti galuuf isa dandeessisu mijeessuuf mootummaa Itoophiyaa wojjiin sadarkaa garagaraatti wolqunnamtii ummee socho’aa turuus ibsa isaa addaaddaa keessatti ifa godhee ture. Mootummaan biyyattiis hariiroon marii ADO fi mootummaa jiddutti geggessuuf dandeessisu jiraachuu amaneera.
Garuu mariin geggeeffamaa ture akka ADOn barbaadutti saffisaan funduratti deemuufi bu’aa barbaadamu argamsiisuu hindandeenne. Egaa kanaaf dhaabichi wolii galtee addaa osoo mootummaa wojjiin hinmallatteessin gara biyyaatti galuuf kan murtee irra gahe, akka ibsa perezidaantii dhaabichaa ob.Leencoo Lataatti. ‘Amma sun waan lafarra harkifateef biyya dhaqnee mootummaa dubbifnee wolhubannoo irra gayuun akka woyyu nutti mul’ate,’ jedhu ob.Leencoon yoo VOAf ibsa laatan. Hogganni dhaabichaa akka biyyatti galanis itti dabalanii ibsaniiru.
Biyyatti deebi’uun isaaniifi dhaaba isaanii irratti balaa qabaachuufi dhabuu isaa kan gaafataman ob. Leencoon, ‘qabsoon balaa hinqabne qabsoo hujii irra hinjirre qofa. Qabsoon kamuu balaa qaba. Balaa kana beekaa itti seenna,’ jedhaniiru.
ADOn biyyatti deebi’ee filannoo biyyattii keessatti baatii Caamsaa geggeeffamu irraa akka dhaabaatti qooda fudhachuuf haalli isa dandeessisu kan hinjirre ta’uu isaa addeessaniiru, ob. Leencoon. Ta’us, miseensonni ADO tarii akka dhuunfaatti, haalli isaan dandeessisa yoo ta’e, filannoo irraa qooda fudhachuu kan danda’an ta’uu akeekaniiru. Itti dabaluudhaanis, filannoo irratti hirmaachuu caalatti, akka Ob. Leencootti, sagaleen Oromoo dirree siyaasaa biyyatti irraa dhabame ture daandii argame hundaan akka xiyyeeffannaa argatu godhuuf ODF dursa akka kennu dubbataniiru.
Addi Dimokraatawaa Oromoo biyyatti galuuf murteessuu isaa malee guyyaa itti galu ammas kan jala hinsararre ta’uu isaati kan perezidaantichi dhaabaa VOA tti himan.
Adda dimokraatawaa oromoo
Previous articleEebjuun bebbeekamoon hiika maal qabu laata?
Next articleDooniin baqattoota Itoophiyaafi Somaalee 49 baadhattee gara Yamanitti qajeelte dhidhimte